देशभर ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ हाउसफुल, राजधानीमा बन्यो नयाँ रेकर्ड ! | THE CINEMA TIMES
Box officeNepal Author:	The Cinema Times - Jul 15, 2017
देशभर ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ हाउसफुल, राजधानीमा बन्यो नयाँ रेकर्ड !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । हिजो शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आएको सिनेमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले बक्सअफिसमा आँधी सिर्जना गरेको छ । शुक्रबार देशभरका हलमा ८० प्रतिशत अकुपेन्सी कायम गरेको सिनेमा शनिबार अलनेपाल हाउसफुल रहेको जानकारी आएको छ ।
राजधानीको गोपीकृष्णका ७ मध्येका ५ हल, गुणका ९ मध्येका ५ हल हाउसफुल भएका छन् । त्यस्तै गङ्गामा दिउसोको शोमा दुवै हलमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ हाउसफुल भएका छन् । गंगाबाट अर्को सिनेमालाई उतारिएको छ । त्यस्तै राजधानीको अष्टनारायणका ४ ओटै हल ‘म यस्तो गीत गाउँछु’का दर्शकले भरिएका छन् । ३ ओटा हलमा लगाइएको सिनेमाका दर्शक बढी भएपछी ३ बजेको शोमा अर्को सिनेमा उतारेर ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ प्रदर्शन गरिएको वितरक गोपाल कायस्थ जानकारी दिए ।
अष्टनारायण पिक्चर्समा चार वटै हल हाउसफुल हुनु भनेको पहिलो रेकर्ड हो । वितरक कायस्थ हर्षित मुद्रामा गफिए । त्यस्तै देशभरका कतिपय मल्टीप्लेक्समा सिनेमाले हाउसफुलको व्यापार गरेको छ । भने, रिलिज भएका जति पर्दामा ८० प्रतिशत भन्दा माथि अकुपेन्सी छ । मल्टीप्लेक्समा रिलिज भएका हलिउड र बलिउड सिनेमा भन्दा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’को दर्शक धेरै रहेको हलवालाहरुले बताएका छन् ।
अष्टनारायण पिक्चर्स प्रालि
शनिबार राजधानीका प्रमुख हलहरुमा पल शाह, पुजा शर्मा, सुदर्शन थापा लगायत दर्शक प्रतिक्रिया बुझ्न पुगे । जहाँ दर्शकको उत्साहपूर्ण माया पाउँदा हर्षित देखिए । सुदर्शन थापा निर्देशित सिनेमाले दर्शकहरुबाट उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाएको छ । सिनेमामा पल शाह, पुजा शर्मा, सरोज खनाल, रुपा राना, राजाराम पौडेल लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
Tags:paul shah, Puja Sharma, rajaram paudel, saroj khanal, Sudarshan Thapa
देशभर ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ हाउसफुल, राजधानीमा बन्यो नयाँ रेकर्ड !0out of5based on0ratings.0user reviews.
यसै वर्ष हुनेछ भारतीको विवाह !
Teen Choice award: दीपिका तिन, प्रियंका एक विधामा मनोनित !
सुरु भयो सुदर्शन र पूजाको ‘रामकहानी’ (फोटोफिचर)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – अभिनेत्री पूजा शर्मा र निर्देशक सुदर्शन थापाको निर्माणमा बन्ने नयाँ…
Nepal	Feb 11, 2018
युट्युबदेखि हलसम्म ‘शत्रुगते’, तर कसरि ?
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – घोषणादेखि नै चर्चामा रहेको सिनेमा ‘शत्रुगते’को टिजर रिलिज भएको छ…
English	Feb 1, 2018
Paul With ‘Pritai Ko Barko’ For Aanchal (Video)
The Cinema Times, Kathmandu- “Shatrugate” team released another video song after the huge success of…